LEGO Black Friday ကိုယူအက်စ် ၂၀၂၀ တွင်ရောင်းချ Brick Fanatics
LEGO Black သောကြာနေ့သည်ယူအက်စ် ၂၀၂၀ တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည်
သောကြာနေ့တိုင်းအနက်ရောင်နှင့်ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့တိုင်းကိုရှာပါ Lego အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကမ်းလှမ်းမှုနှင့်မြှင့်တင်ရေး။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်အပေးအယူနှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့ဆင်း scroll လုပ်ပါ။
LEGO.com - VIP တနင်္ဂနွေ (နိုဝင်ဘာ ၂၁-၂၂)
၀ ယ်ယူမှုအားလုံးအပေါ် VIP နှစ်ဆ (ငွေပြန်အမ်းငွေ ၁၀% နှင့်ညီသည်)
အခမဲ့ 40410 ချားလ်စ်ဒစ်ကင်းအခမ်းအနား $ 20.99 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၏ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ $ 150 တန်ဖိုးရှိအစုံ
အခမဲ့ Lego 50062912×4Teal Brick သည်ဒေါ်လာ ၂၀၀ နှင့်အထက်ဝယ်ယူမှုများနှင့်အတူ ၁၁.၉၉ ဒေါ်လာတန်ဖိုးရှိသည်
LEGO.com - Black Friday / Cyber ​​Monday (နိုဝင်ဘာ ၂၇-၃၀)
20% အထိအထိ ရွေးချယ်ထားသည့်ပစ္စည်းများ at LEGO.comအပါအဝင် ၇၅၂၄၄ Tantive IV, 10220 Volkswagen က T1 ကို Camper ဗန် နှင့် 853967 သစ်သား Minifigure
အခမဲ့အားလပ်ရက်ဒေါ်လာ ၄၀ နှင့်အထက်ဖြင့်ဝယ်ယူထားသော (သာ In-store ကိုဖြစ်နိုင်သည်)
တနင်္ဂနွေနေ့တစ်လျှောက်လုံးတွင်ပါ ၀ င်သောသီးသန့် VIP ဆုများ
ဒေါ်လာ ၇,၆၉၂ တန်သော ၁၀၀,၀၀၀ VIP ရမှတ်များရရှိရန်အခွင့်အလမ်း
အကြီးဆုံးအစဉ်အဆက် Lego အစုံ ၁၀၂၇၆ Colosseum လွှတ်တင်, အခမဲ့နှင့်အတူ Lego ရောမရထားအစုပါ ၀ င်သည်။
iDisplayit - သောကြာနေ့မှောင်ခိုရောင်းဝယ်မှု (နိုဝင်ဘာ ၂၇ - နိုဝင်ဘာ ၂၉)
နို ၀ င်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ၀ ယ်ယူထားသည့်ပစ္စည်းအားလုံး၏ ၂၀% ရှိသည် သူတို့ရဲ့ website.
စနေနေ့နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်နှင့်တနင်္ဂနွေနေ့နိုဝင်ဘာ ၂၉ တွင်£ ၁၀၀ နှင့်အထက်ဝယ်ယူမှုများသည်အခမဲ့ဖြစ်သည် Lego BrickHeadz display case ။
$ 80 နှစ်စဉ်ဖြတ်သန်း, သူတို့ကို $ 99.99 မှဆင်းဆောင်ခဲ့
$ 50 အထိချွေတာသောအားလပ်ရက်အစီအစဉ်များမှ ၅၀% လျှော့ချသည်
တစ်သက်တာဖြတ်သန်းမှု၏ ၆၀% သည်ဒေါ်လာ ၁,၉၉၉ သို့ကျဆင်းသွားသည်
၁၁၀၁၁ အုတ်နှင့်တိရစ္ဆာန်များသည်ဒေါ်လာ ၃၀ ကျသင့်သည်
၇၆၁၂၆ Avengers Ultimate Quinjet ဆင်း $ 55.99 ဖြစ်ပါတယ်
40353 Reindeer Elf နှင့် Elfie တို့သည်ဒေါ်လာ ၁၄.၉၉ ကျသင့်မည်
71362 Guarded ခံတပ် $ 40 အထိဖြစ်ပါတယ်
71368 ဘောင်းဘီ၏ Treasure Hunt က $ 56 သို့ကျသည်
75940 Gallimimus နှင့် Pteranodon Breakout ဆင်း $ 40 ဖြစ်ပါတယ်
70420 သင်္ချိုင်းနက်နဲသောအရာ ဆင်း $ 20.99 ဖြစ်ပါတယ်
70432 သရဲခြောက်တဲ့ Fairground ဆင်း $ 34.99 ဖြစ်ပါတယ်
70419 ရေငန်ပုစွန်လှေ ဆင်း $ 20.99 ဖြစ်ပါတယ်
70418 JB ၏ Ghost Lab သည်ဒေါ်လာ ၁၃.၉၉ ကျသင့်သည်
70421 El Fuego ၏ Stunt Truck သည်ဒေါ်လာ ၂၇.၉၉ ကျသင့်သည်
70429 El Fuego ၏ Stunt Plane သည်ဒေါ်လာ ၂၀.၉၉ ကျသင့်သည်
70427 မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် Hidden Side ဆင်း $ 13.99 ဖြစ်ပါတယ်
70423 Paranormal ကြားဖြတ်ဘတ်စ်ကား 3000 ဆင်း $ 41.99 ဖြစ်ပါတယ်
70430 Newbury မြေအောက်ရထားဟာဒေါ်လာ ၂၀.၉၉ ကျသင့်တယ်
71712 ရူးသွပ်အင်ပါယာဘုရားကျောင်း ဆင်း $ 73.49 ဖြစ်ပါတယ်
21046 အင်ပါယာပြည်နယ်အဆောက်အ ဦး ကုဒ် EMPIRE နှင့်အတူ $ 95 အထိဖြစ်ပါတယ်
70678 Forsaken perကရာဇ်၏ရဲတိုက်သည်ဒေါ်လာ ၈၉.၉၉ ကျသင့်သည်
60228 Deep Space Rocket နှင့်လွှတ်တင်ထိန်းချုပ်မှု ဆင်း $ 82.99 ဖြစ်ပါတယ်
60229 ဒုံးပျံညီလာခံနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး $ 89.99 အထိဖြစ်ပါတယ်
75980 အဆိုပါ Burrow အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု ဆင်း $ 79.99 ဖြစ်ပါတယ်
41375 သူartအင်းအိုင် City အပန်းဖြေဆိပ်ခံတံတား ဆင်း $ 77.99 ဖြစ်ပါတယ်
၇၆၃၈၆ Hogwarts Great Hall ကဒေါ်လာ ၅၉.၉၉ ကျတယ်
41374 Andrea ရဲ့ရေကန် P ကိုarty က $ 29.99 အထိကျသည်
75956 Quidditch ပွဲစဉ် ဆင်း $ 23.99 ဖြစ်ပါတယ်
Black Friday သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှ real-time အတွက်ပေးသည်
Black Friday နှင့် ၂၀၂၀ လျှော့စျေးများနှင့်ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များအားလုံးအတွက်အချိန်နှင့်တပြေးညီနောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်အတူတိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုရှာဖွေပါ Lego ဤနေရာတွင်အရောင်းနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများ
အဆိုပါ Lego အုပ်စုသည်သူတို့၏ Black Friday ကမ်းလှမ်းမှုများကိုတနင်္ဂနွေနှစ်ရက်အကြာတွင် Black Friday သောတနင်္ဂနွေမတိုင်မီတစ်ပတ်အလိုတွင် VIP Weekend နှင့်အတူပြေးနေကြသည်။ နို ၀ င်ဘာလ ၂၁ ရက်နှင့် ၂၂ ရက်တို့၏ VIP Weekend တွင်အားလုံးဝယ်ယူသည် LEGO.com နှစ်ဆ VIP ရမှတ်များလက်ခံရရှိသည်။ ၎င်းသည် ၁၀% cashback နှင့်ညီသည်။ တန်ဖိုးမြင့်ဆုံးပစ္စည်းများအားဝယ်ယူရာတွင်တန်ဖိုးအရှိဆုံးဟုခံစားရသောအခါဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ဒေါ်လာ ၁၅၀ နှင့်အထက် ၀ ယ်ယူမှုများအားလုံးသည်ဒေါ်လာ ၂၀.၉၉ တန်သော ၄၀၄၁၀ ချားလ်စ်ဒစ်ကင်းအခွန်ငွေကိုအခမဲ့ရရှိပြီးဒေါ်လာ ၂၀၀ နှင့်ထို့ထက်ပိုသော ၀ ယ်မှုများအားလုံးသည်ဒေါ်လာ ၅၀၆၂၉၁ 150 × 40410 Teal Brick set ကိုဒေါ်လာ ၁၁.၉၉ ဖြင့်ရရှိသည်။ VIP အချက်နှစ်ဆသည် VIP Weekend တစ်ခုလုံးကိုဖြတ်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းဤလက်ဆောင်များနှင့် ၀ ယ်ယူမှုနှစ်ခုသည်စတော့များနောက်ဆုံးကျန်ချိန်တွင်သာရရှိနိုင်ပါသည် - ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံး Teal အုတ်အစုံတွင်ကန့်သတ်ထားသည့်စတော့များကိုမျှော်လင့်ပါသည်။
LEGO.com - တနင်္ဂနွေနေ့မှ Cyber ​​တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့ (နိုဝင်ဘာ ၂၇-၃၀)
Black Friday သောတနင်္ဂနွေ၏လေးရက်တာကာလ၊ Black သောကြာနေ့မှသည် Cyber ​​တနင်္လာနေ့အထိဖြစ်သည် Lego Group မှကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ပရိုမိုးရှင်းအတော်များများကို run လိမ့်မည်။ ရွေးချယ်မှုအပေါ်မျှော်မှန်းထားသည် (သို့သော်အတည်မပြုရသေးသေး) လျှော့ချအတူ Lego အစုံ, အ Lego လေးရက်တာကာလအတွင်းအုပ်စုလိုက်သီးသန့် VIP ဆုများကိုထုတ်ပေးနေပြီးကံကောင်းသူတစ် ဦး အတွက်ဒေါ်လာ ၇,၆၉၂ တန်ဖိုးရှိ VIP အမှတ် ၁၀၀၀,၀၀၀ ရရှိရန်အခွင့်အလမ်းကိုလည်းပေးနေသည်။
ထို့အပြင် Black Friday မှဒေါ်လာ ၄၀ နှင့်အထက်အားလုံး၏ ၀ ယ်ယူမှုများတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် LEGO.com အခမဲ့အားလပ်ရက်သစ်ပင်အစုံ (သာစတိုးဆိုင်၌ဖြစ်နိုင်သည်), $ 150 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၏ဝယ်ယူမှု $ 40410 တန်ဖိုးရှိအခမဲ့ 20.99 ချားလ်စ်ဒစ်ကင်းအခွန်ဆက်ထားကိုလက်ခံရရှိနေတုန်း။ တနည်းကား, ဤမြှင့်တင်ရေးနှစ်ခုလုံးကို run နေကြသည် စတော့ရှယ်ယာနောက်ဆုံးနေစဉ်.
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် Black သောကြာနေ့တလျှောက်တွင်အများဆုံးမှတ်သားလောက်အစဉ်အဆက်အကြီးဆုံးအသစ်၏ပစ်လွှတ်သည် Lego အစုံ, ၁၀၂၇၆ Colosseum။ ရောမမြို့၏ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး အားဤထူးခြားသောအခမ်းအနားသည်နို ၀ င်ဘာ ၂၇ ရက်မှ စတင်၍ ရရှိနိုင်ပါသည်။ LEGO.com အခမဲ့ရောမရထားအစုံပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ် နောက်တကြိမ် ထပ်မံ၍ ဤအချိန်သည်စတော့ရှယ်ယာများနောက်ဆုံးကျန်နေခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစာချုပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်သတ်ထားရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
iDisplayit - Black Friday သောကြာနေ့ (နိုဝင်ဘာ ၂၇ - နိုဝင်ဘာ ၂၉)
နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်၊ သောကြာနေ့အနက်ရောင်၊ iDisplayit မှတဆင့်ဝယ်ယူအရာအားလုံးကိုချွတ် 20% ကမ်းလှမ်းနေကြသည် သူတို့ရဲ့ website.
စနေနေ့နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်နှင့်တနင်္ဂနွေနေ့နိုဝင်ဘာ ၂၉ တွင်£ ၁၀၀ နှင့်အထက်ဝယ်ယူမှုများသည်အခမဲ့ဖြစ်သည် Lego BrickHeadz စုဆောင်းထားသောစာလုံးတစ်လုံးကိုပြသရန်သပ်ရပ်သောဖုန်မှုန့်ကင်းသည့်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကိုပြသသည့်အဖုံး။
LEGOLAND နယူးယောက်သည်ကမ်းလှမ်းသည် မယုံနိုင်စရာသဘောတူညီချက် LEGOLAND USA ဥယျာဉ်သုံးခုစလုံးကိုဖြတ်ပြီးအလုပ်လုပ်သည်။
Walmart သောကြာနေ့က Black Temats အတွက်ဈေးနှုန်းများကျဆင်း
Best Buy သည်အချို့သောအထူးလျှော့စျေးများဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည် Lego Hidden Sideယခုနှစ်အနားယူတော့မည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်
Zavvi ၏အမျိုးမျိုးသောလျှော့စျေးကုဒ်များကို အသုံးပြု၍ သင်အရောင်းရဆုံးနိုင်သည်။
ပစ်မှတ်ဟောင်းနှင့်အကောင်းတစ် ဦး ရောနှောလျှော့ခဲ့သည် အသစ်အစုံအပါအဝင် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, CITY နှင့် Friends:
အနက်ရောင်သောကြာနေ့ Lego Star Wars
ဤသည်သည်လူကြိုက်အများဆုံးအပေါ်အပေးအယူအချို့ကိုအိတ်ဖွင့်ချခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Lego ဆောင်ပုဒ်, လက်ရှိ Lego Star Wars, 75912 ထောင်စုနှစ် Falcon အပါအဝင်ထိပ်တန်းအစုံနှင့်အတူတရားဝင်ဖြစ်ဖွယ်ရှိကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူ 75159 မရဏစတား.
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်းက Black သောကြာနေ့တနင်္ဂနွေနေ့များအတွက်အထူးလျှော့စျေးများသည်တစ်နေ့တွင်ပင်ကွဲပြားခြားနားခဲ့သည် - အသစ်အစုံ နေ့စဉ်လျှော့စျေးနှင့်အတူထည့်သွင်းပေမယ့်မကြာခဏသောတစ်ရက်သာအဘို့ - ဝယ်ယူအစုံနှင့်အတူတနေ့လက်ဆောင်ပင်အတိတ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
LEGO အငြိမ်းစားအစုံက Black သောကြာနေ့ကမ်းလှမ်းမှု
အဘယ်အရာကိုကစုဆောင်းသူများအဘို့အပိုအရေးကြီးတယ်စေသည်လျှော့စျေးအစုံအများအပြားကဲ့သို့, အငြိမ်းစားခံရဖို့အကြောင်းကိုသောသူတို့ဖြစ်ကြသည် LEGO.com စာရင်းလျှော့ချရန်ရှာသည်။ အဆိုပါသဘောတူညီချက်များသည်ကြာရှည်မခံပါ။
ကလေးများ၊ မြေးများ၊ တူများ၊ တူမများနှင့်ပရိတ်သတ်များသည်ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်များအပြင်အခြားကောင်းမွန်သောအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုပင်တွေ့နိုင်သည်။ အသစ်အစုံ သူတို့အတွက် Lego stashes ။ ထိုအပေးအယူများသည်အချို့သောသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ရည်ရွယ်ထားသည့်အရွယ်ထက်အနည်းငယ်ပိုကြာသည်။